Miyey Waallan Yihiin? - Manchester United Oo La Sheegay Inay Iibinayso Scott McTominay & Solskjaer Oo Uu Ka Fashilmay Qorshe Uu Ku Dirayey - Gool24.Net
Miyey Waallan Yihiin? – Manchester United Oo La Sheegay Inay Iibinayso Scott McTominay & Solskjaer Oo Uu Ka Fashilmay Qorshe Uu Ku Dirayey
Kooxda kubadda cagta Manchester United, ayaa la sheegay inay iibinayso xiddigeeda da’da yar ee xili ciyaareedkii hore usoo baxay ee Scott McTominay oo ay taageereyaasha iyo khubrada ciyaaruhu u arkaan inuu yahay xiddiga mustaqbalka hoggaamin doona Red Devils.
Jose Mourinho ayaa ayaa usoo dallacsiiyey kooxda koowaad laacibkan yar ee Scott McTominay oo markiiba xoogsaday boos joogto ah, bandhig layaab lehna sameeyey, waxaana muhiimaddiisa lasii dareemay xili ciyaareedkan oo ka hor intii aanu dhaawacmin uu tiir dhexaad u ahaa Red Devils.
Markii uu Ole Gunnar Solskjaer la wareegay kooxda xili ciyaareedkii hore badhtankiisii, waxa uu McTominay ku dhowaaday inuu ka tago Manchester United oo uu amaah ugu biiro kooxda reer Scotland ee Celtic, balse markii uu dhaawacmay Paul Pogba bilowgii xili ciyaareedkan ee ay ku yaraadeen ciiyaartoyda khadka dhexe, ayuu Solskjaer fursad siiyey McTominay oo uu joojiyey qorshihii uu doonayay inuu ugu diro naadi kale oo uu waqti fiican ka helo.
Brian McClair oo hore ugu ciyaari jiray Manchester United ayaa waxa uu sheegay in McTominay uu noqon doono halyey weyn oo United ah, laakiin waxa uu soo bandhigay cabsi ah inuu ka baqayo in tababare Ole Gunnar Solskjaer uu iibiyo, si la mid ah qorshaha uu hore ugu dirayay Celtic ee ka fashilmay.
“Waxay ila tahay in haddii uu McTominay joogo Manchester United, in uu noqon doono halyey weyn oo Manchester United ah.”
McClair waxa uu tilmaamay laacibka ay isku qaabka yihiin ee uu sidiisa oo kale noqon doono McTominay, waxaanu yidhi: “Wuxuu leeyahay waxyaabo la mid ah Darren Fletcher. Wuxuu kasoo baxay kulliyadda da’yarta kooxda, wuu doonayay, waxa uu ahaa taageere Manchester United ah, waanay ka go’nayd (inuu u ciyaaro).
“Wuxuu kasoo kabtay xaalado kala duwan oo ahaa koritaankii, dhaawacyo iyo xanuun, waxaanan qabaa inuu noqonayo xiddig weyn oo Manchester United ah.”
Intaa kaddib waxa uu Brian McClair soo bandhigay cabsida ka haysa mustaqbalka Scott McTominay, waxaanu yidhi: “Waxaan rajaynayaa inuu baaqi kusii ahaado Manchester United muddo dheer oo ku filan, laakiin layaab iguma noqonayso haddii ay jireen kooxo kale oo raadinaya inay heshiis la saxeexdaan mustaqbalka dhow.”